Ukusebenza ngamaxesha obunzima | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje siza kuthetha ngesihloko esifanelekileyo kubo bonke abafundi bethu abangoosomashishini, oosomashishini abasebenza ngokukhululekileyo kananjalo nabo bonke abantu abazimeleyo, kuba siyazi ukuba ilizwe lidlulile ixesha elinzima kwezoqoqosho nakwezopolitiko kwaye kukho imiqondiso yokuba kuya kuthatha ixesha ukuphucula.
Yiyo loo nto ilixesha apho kufuneka ngaphezulu kwako konke sibeke umahluko ecaleni kwaye sincedane gcina ishishini lethu lisempilweni kwaye lichuma. Nazi ke iingcebiso endithe ndazibona kwaye ndathetha neengcali ezinamava esele zinamaxesha afanayo kwaye zikwazile ukuhlala kwintengiso.
1 Iingcebiso ukuze ingxaki ingakuchukumisi ngokupheleleyo
2 Sika iindleko
3 Ukugcina unxibelelana nomthengi kubalulekile
4 Ukuyila iiprojekthi
5 Landela iintsingiselo
Iingcebiso ukuze ingxaki ingakuchukumisi ngokupheleleyo
Olo fikelelo lukhulu, olo hambo lweshishini phesheya, olo tshintsho kwikomkhulu lenkampani, lelo lixesha elifanelekileyo lokuphonononga konke oku kunye nezinye iindleko inkampani yakho enazo. Ewe, Kuyimfuneko ukuba utyalomali kwinkampani yakhoNangona kunjalo, iindleko nomngcipheko oku kubandakanya oku kufuneka ulinganiswe, ngakumbi xa kunokwenzeka ukuba kunqabe imisebenzi kwaye nembuyekezo kutyalo-mali lwakho ayiqinisekiswanga kangako.
Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba akukho meko imbi kunamaxesha obunzima, ke ukusika kuzo zombini iindleko kunye nezixhobo kunokuba yimfuneko. Yenzeka uhlahlo-lwabiwo mali olunenzuzo esezantsi Lukhetho lokufumana imisebenzi emininzi ivaliwe ngelo xesha, kodwa kuhlala kufanelekile ukuthatha unonophelo lohlahlo-lwabiwo mali ukuze ungasebenzi simahla. Umzekelo, ukuba ungumntu osebenza yedwa osebenza ekhaya, yintoni uncedo lokuba nomnxeba ukuze wenze ishishini xa inxenye yeeprojekthi zakho isonjululwa nge-imeyile, i-WhatsApp kunye nemiyalezo kwifowuni yakho?
Iindleko ezikwiakhawunti ezinzileyo ezinje ngerente zihlala zifuna ukuphononongwa kwaye ziphinde zaxoxwa, kuxhomekeke kwimeko yakho, amaxesha amaninzi kwanele ukwenza utshintsho kwikomkhulu elisezantsi okanye yenza iofisi yasekhayaEwe kunjalo, uhlala uzama ukugcina imveliso efanayo kunye nokuhanjiswa komsebenzi.
Ukugcina unxibelelana nomthengi kubalulekile
Njengoko besesitshilo, ingxaki ayisoloko ilixesha elifanelekileyo lokuyenza utyalo-mali kwizixhobo, ezokuhamba nezakhiwo, Kodwa into ehlala ihlawula kukujonga abafowunelwa bakho, ikakhulu ujonga indlela ubudlelwane bakho kunye nayo yonke imarike, hayi abaxhasi kuphela, kodwa amaqabane oshishino, abathengisi kunye nabo bakhuphisana nabo.
Into iinkampani ezininzi ezithanda ukuyihoya yinkcubeko yangaphakathi, hayi kuphela ubudlelwane nabasebenzi abakhoyo ngoku, kodwa ikakhulu nababesebenza ngaphambili, nokuba abasekho kwinkampani yakho kubaluleke kakhulu ukuba umbono olungileyo wendawo apho babekade basebenza khona, kuba oko kuya kuchaphazela ngokungangqalanga ubudlelwane bakho nayo yonke imarike.
Ukudibana nabantu abasuka kwezinye iimakethi kukwalisenzo esihle ngelo xesha, amaxesha amaninzi kukho izicelo zenkonzo yakho kwezona ndawo zixhaphakileyo nezingaxhaphakanga kakhulu, ke gcina ingqondo evulekile.
Akukho xesha lingcono zama kwaye ulinge iiprojekthi zobuqu kunamaxesha obunzima, kuba ayisiyomfuno yodwa yomsebenzi ephantsi, ekuvumela ukuba ube nexesha elingakumbi, kodwa kukwakho nakumaxesha obunzima apho ezona zisombululo zisemagqabini ziye zifuneke, ke ngoko, sebenzisa eli thuba ukuvavanya izimvo ezintsha ,.
Into ebalulekileyo kukusoloko usebenza okanye usenza into, ukuma ngxi okanye ukujonga nje abathengi ngaphandle kwempumelelo enkulu kuya kuvelisa uxinzelelo kuwe nakwiqela elikungqongileyo.
Ihlabathi alikho ngenxa yeengxaki, lihlala liguquka rhoqo kwaye alizukulinda ukuba ube ngowakho konke okusemandleni ukuze ukwazi ukuhamba nawe. Ke ibalulekile yazi into eyaziwayo ngoku, Iinkampani ezininzi ziphela zisebenzisa ithuba lokwenza izinto eziyimpumelelo okanye ukuvula amashishini amatsha.
Kuyimfuneko, nangona kunjalo, ukuba unonophele kutyekelo ukuze ungabambi «ukuphela kwekharavani», kuyinto eqhelekileyo ukubona oosomashishini abazama ukuthatha ithuba lokuhamba esele ziphelelwe lixesha. Ukutyala imali kufuneka ube sisilumko kwaye wazi indlela yokwahlulahlula into evelayo kwinto enciphayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukusebenza ngamaxesha obunzima
IParaidolia ifumana ubuso kwizinto ezisingqongileyo